एमालेको दसौं महाधिवेशनमा देखिएका १० दृश्य :: राजेश घिमिरे :: Setopati
नेकपा एमालेले आफ्नो दसौं महाधिवेशन शुक्रबार चितवनको नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन गरेको छ।
यस क्रममा नारायणघाट र भरतपुर सहरभित्रको यातायात र यहाँबाट आउजाउ गर्ने लामो दुरीका सवारी तथा एम्बुलेन्सको आवागमनसमेत ठप्प हुने गरी जनसागर उर्लिएको थियो।
दसौं महाधिवेशन रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा मैले देखेका १० रोचक दृश्य यस्ता छन्:
१) दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जति ठूलो भीड देखियो, चितवनमा अहिलेसम्म भएका कुनै पनि कार्यक्रममा यति ठूलो उपस्थिति भएको थिएन। यसअघि विद्यार्थी संगठन र विभिन्न संस्थाका अधिवेशन भए पनि चितवनमा यति ठूलो राजनीतिक जमघट पहिलोपटक भएको हो।
उपस्थितिका हिसाबले चितवनको इतिहासमै एमाले महाधिवेशन अहिलेसम्मकै धेरै मान्छे उपस्थित भएको कार्यक्रमसमेत बनेको दाबी गरिएको छ। एमालेले महाधिवेशनमा पाँच लाख मानिस उतार्ने दाबी गरेको थियो। दाबीअनुसार नभए पनि झन्डै दुई लाख उपस्थित भएको स्थानीयको आकलन छ।
२) एमालेले महाधिवेशनस्थलमा एकसिंगे गैंडाको मस्कट राखेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निकै चासोका साथ उक्त मस्कट अवलोकन गरेका थिए।
दुई खुट्टाले टेकेर उभिएको गैंडाले नेकपा एमालेको झन्डा उचालेको छ। उद्घाटन सकिएपछि एमालेको झन्डाको ठाउँमा राष्ट्रिय झन्डा राख्ने बताइएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा गैंडालाई अंग्रेजी भाषामा पनि गैंडा नै भन्नुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको निकै चर्चा भएको थियो।
३) महाधिवेशनको उद्घाटनस्थलमा मजदुरले पृथ्वी उचालेको मूर्ति तयार पारिएको थियो। श्रमजीवि मजदुरले विश्व चलाउँछ भन्ने मान्यताका साथ पार्टीको भ्रातृ संगठन जिफन्टले यो मूर्ति तयार पारेको हो। उक्त मूर्तिसँग फोटो खिचाउनेको दिनभर भीड लागेको थियो।
४) नारायणी नदीपारि गैंडाकोटको बगरमा पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीको भाषण सुन्नेको भीड लागेको थिय‍ो। एमालेले नारायणीपारि स्क्रिन राखेर उद्घाटन कार्यक्रम देखाएको थियो।
५) महाधिवेशन क्रममा गैंडाकोटबाट नारायणगढ आउने पुलमाथि मानिसहरू भरिभराउ भएकाले एम्बुलेन्सलाई समेत पुल पार गर्न सकस भएको देखियो। यसबाट बिरामीले निकै सास्ती पाए। बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स घन्टौं जाममा परेका थिए।
यसअघि प्रशासनले शुक्रबार महाधिवेशन उद्घाटनको दिन गैंडाकोटबाट एम्बुलेन्सलाई पनि नारायणगढ आउन नदिने बताएको थियो। यसको चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त निर्णयबाट पछि हटेर एम्बुलेन्सलाई आवतजावत गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
६) नारायणीमा चलेको मोटरबोटले धेरैको ध्यान तान्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा पानीजहाज चलाउने बताएर कार्यालय नै खोलेका थिए। चितवनमा पनि पानीजहाजकै शैलीमा स्टिमर तयार पारिएको थियो। तर आवश्यक कानुनको अभावमा बनेको करिब एक वर्ष भइसक्दा पनि चल्न सकेको छैन।
दाङ, लमहीका ७२ वर्षीय आमबहादुर गिरी नारायणी नदीको किनारमा बसेर मोटरबोट हुइँकिएको हेरिरहेका भेटिए। उनले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा 'नारायणी नदीमा पानी जहाज चलाउने' भनेर भाषण गरेको सम्झिए। 'चलाउनुहुन्थ्यो पनि होला, सरकार ढालिहाले,' उनले भने, 'आज यो मोटरबोट हेरियो, पानीजहाज हेर्ने त कहिले हो कहिले! पार्टीले अब फेरि सरकार चलाउन पायो भने चलाउला नि!'
७) महाधिवेशनमा आइपुगेका कतिपयले खानेकुरा पोको पारेर ल्याएका थिए। कोही बाटोको छेउमा त कोहीले नदीको बगरमा प‍ोको फुकाएर भोक मेटाए। बर्दियाबाट आइपुगेको एउटा टोलीलाई नारायणीको तिरमा बसेर झोलामा बोकेर ल्याएको सुक्खा रोटी खाँदै गरेको हामीले भेटेका थियौं।
८) महाधिवेशनमा आएका थुप्रै एमाले कार्यकर्ताहरू गोहीको मूर्तिमाथि बसेका थिए। उनीहरूलाई आफू गोहीमाथि बसिरहेको पनि थाहा थिएन। नारायणी नदी घडियाल गोहीको मुख्य बासस्थान मानिन्छ। यहाँ आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले घडियालको मूर्ति तयार गरिएको थियो।
९) सवारी साधनलाई राजमार्ग प्रवेश गर्न रोक्न प्रहरीले सडकको बीचमा 'बाटो बन्द' लेखिएको बोर्ड राखेको थियो। महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर जिल्ला सुरक्षा समितिले भरतपुरको केही क्षेत्रमा 'नो भेइकल मुभमेन्ट' गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ट्राफिक प्रहरी स्रोतका अनुसार शुक्रबार दुई हजारभन्दा बढी ठूला सवारी साधन, करिब १० हजारवटा मझौला तथा साना सवारी साधन र पाँच हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल महाधिवेशनका लागि चितवन प्रवेश गरेका थिए।
१०) एमाले महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर नवलपुरबाट चितवनतर्फ गाडी प्रवेश गर्न नदिइएपछि नारायणी नदीको पुलमा ठूलो भीड जम्मा भएको थियो। महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गैंडाकोटबाट नारायणगढ आइपुग्न तीन घन्टा समय लागेको बताएका थिए।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८, १२:०७:००